Nutrition | MyanCare
ရေသားသူ : ဒေါ်သဲလ်မာထွန်းသိန်း (အာဟာရဗေဒပညာရှင်)
by myatlynn | Aug 7, 2020 | Nutrition
ရင်သွေးလေးများရဲ့ အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွေးမွေးစားသောက်မှုပုံစံများ နည်းစနစ်ကျစေဖို့ လမ်းညွှန်ပြသပေးနေတဲ့ ဆရာမ အန်တီသဲလ်မာထွန်းသိန်း MyanCare App ပေါ်မှာရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။
ဆရာမကြီးနှစ်ရှည်လများ အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကတော့ လူတွေကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ရောဂါဘယကင်းဝေးတဲ့ နေထိုင်မှုဘဝဖြစ်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမကြီး အဓိက ဆွေးနွေးပေးတာတွေကတော့ နို့တိုက်မိခင်များ အောင်မြင်စွာ နို့ချိုတိုက်ကျွေးရေး၊ ရင်သွေးလေးများ ကျန်းမာဖို့ မိခင်များအသိပညာတိုးတက်ရေး၊ မိသားစုများ ပျော်ရွှင်ထက်မြတ်စွာ နေထိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးရေး စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့် နို့တိုက်ချိန် မှာ အာဟာရမျှတစွာစားသောက်မှုပုံစံများသိရှိနားလည်လိုပါသလား?
ရင်သွေးငယ်များအသက်၆လမှာ ဖြည့်စွက်စာကျွေးခြင်းနှင့် ကျောင်းတက်စဉ်တလျောက် အာဟာရမျှတစုံလင်စွာကျွေးမွေးခြင်း အကြောင်းများ သိရှိလိုပါသလား?
သင့်ရင်သွေးရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ ပြဿနာရှိနေတယ်လို့ ထင်ပါသလား?
ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန် ဝနေလား ပိန်နေလား ဆန်းစစ်ချင်ပါသလား?
နိုင်ငံတကာတွင်ကျင့်သုံးနေသော အာဟာရနှင့် စားသောက်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို သိရှိလိုပါသလား?
ဆရာမ အန်တီသဲလ်မာ မှကူညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
အခုပဲ ဖုန်းထဲကနေ Application ကို အသုံးပြုပြီး voice call / video call တွေနဲ့အသုံးပြု တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်တာ ဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်း ဘယ်တိုင်း ဘယ်ပြည်နယ်ကမဆို ဆရာမကြီး နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ app ထဲမှာ အခုပဲ booking ယူလိုက်ပါ။
ကလေးဆို ဝဝကစ်ကစ်လေးမှ တို့ ဟယ် နင့်ကလေးက ညှက်လိုက်တာ တို့ အပြောခံဘူးကြလား….မေမေတို့ရေ